शिव परियारले भने 'नवराजको खबरले मननै रु,,वाययो' - Filmy News Portal Of Nepal
शिव परियारले भने नवराजको खबरले मननै रुवाययो’
नेपालको कानुनले जातीय आधारमा छुवाछूतलाई द ण्डनीय अ पराध भनेको ५७ वर्ष भएको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछूतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार मानवीय मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति देशको कानुनले गरेको छ ।
तर, अ न्तरजातीय प्रेम बिहे गर्न जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुम आएका युवा र उनको लास मात्र होइन, मानवीय संवेदना पनि नदीमा बगेको छ । जाजकोटका २० बर्षिय युवा नवराज विश्वकर्माले प्रेम गरेका कारण नै ज्या न गुमाउनु परेको छ । दलित भएकै कारण उनको ज्या”न गयो । कथित उपल्लो जातिकी युवतीसंग प्रेम गरेका उनि र उनका साथी उनलाई भगाउन गाउँ जाँदा ह* त्या भएपछि धेरैले यस विषयको खुलेर वि रो ध गरेका छन् ।
अ न्तर जातीय विवाहको विषयलाई लिएर रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । संजाल मार्फत नै धेरैले आक्रोश पोखेका छन् । बिभिन्न सेलिब्रेटीले पनि यसको बि रो ध गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तै चर्चित गायक शिब परियाले पनि यस घ”टनाको वि रो ध गर्दै आफ्नो अभिव्यत्ति दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दलित शब्द खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् – जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ तब समानता कसरी सम्भव हुन्छ ? जातिय उ’त्पिडनमा परेका बर्गहरुको सम्बोधनमा प्रयोग गरिने “दलित” शब्द खारेज गरियोस ! यो शब्दको उच्चारण र प्रयोगले पनि मान्छे मान्छे बिचमा बि भे द बढाउन मद्दत गरेको महशुस भएको छ ! दलित सम्बोधनको साटो समग्र जातिय उ त्पिडनमा परेका नेपालीहरुको सम्बन्धमा सम्मानजनक शब्दको ब्यवस्था गरियोस !
उ त्पिडनमा परेका बर्गहरुको शैक्षिक र सामाजिक अवस्था सुधारोन्मुख परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारले उल्लेखनिय भुमिका खेलोस ! नेपाल सरकार र सम्पुर्ण उ त्पिडित बर्गको समानताको लागि आवाज उठाउने निकाय, संस्था, अभियान कर्ता र ब्यक्तिहरुमा म लगायत सबैको सादर अनुरोध ! – शिब परियार